(ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
(1933-02-02) ၂ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၃၃ (အသက် ၈၇) သို့မဟုတ်
(1935-05-03) ၃ မေ၊ ၁၉၃၅ (အသက် ၈၅)[note ၁]
၂.၁ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ
ဦးသန်းရွှေကို ၁၉၃၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အင်းမရွာ၌ အဖ ဦးလေးမြင့်၊ အမိ ဒေါ်စိမ်းရင်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။[note ၁] ဦးသန်းရွှေသည် ငယ်စဉ်က ကျောက်ဆည်မြို့၌ စတင်ပညာသင်ကြား၍ ၁၉၅၁ ခုနှစ် အသက် ၁၈ နှစ်၌ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၁ဝ တန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁ဝ တန်း စာမေးပွဲ အောင် မအောင် ကို အတိအကျ မသိရသော်လည်း မဆလပါတီ ဗဟိုကော်မတီလောင်း ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်း၌ ၁ဝ တန်းအောင်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
တပ်မတော် အရာရှိ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၅၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၁) ခြေလျင်တပ်ရင်း၌ ဒုဗိုလ်အဖြစ် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ရာထူးဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ တွင် ဗိုလ်ကြီး ရာထူးဖြင့် တပ်ခွဲမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အမှတ် ၁ ခြေလျင်တပ်ရင်းဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် KNU နှင့် ဗကပတို့ကို စစ်ဆင်ရေး တိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ
၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် အမှတ် ၁၀၁ ခြေလျင်တပ်ရင်း၌ ဌာနချုပ် တပ်ခွဲမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)၊ စစ်ဦးစီးဌာနတွင် စစ်ဦးစီးမှူး (ဒုတိယတန်း) အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) စစ်ဆင်ရေးဌာနစု စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် အမှတ် ၈၈ ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်၌ ဒုတိယတပ်မမှူး၊ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် ယင်းတပ်မ၌ပင် တပ်မမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၈ ရက်နေ့တွင် အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတာဝန် တိုးမြှင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၉ ရက်နေ့မှစ၍ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသပါတီ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၈၈၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ တွင် တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ဦးဆောင်သော နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့တွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခံရပြီး ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
↑ Wheeler၊ Ned။ "Obituary: General Saw Maung"၊ The Independent၊ 28 July 1997။
↑ The Worst of the Worst - By George B.N. Ayittey။ Foreign Policy။ 2011-03-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Koyakutty, Haseenah (July 15, 2009). UN gains leverage over Myanmar. Asia Times Online.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သန်းရွှေ၊_(ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး)&oldid=496959" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၂:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။